အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် (စာ) တည်းဖြတ်ရန် အကြံပြုချက် (၇) ချက် - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် (စာ) တည်းဖြတ်ရန် အကြံပြုချက် (၇) ချက်
Posted by Soe Soe Win on May 16, 2013 at 15:47 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
သင့်ရဲ့ အရေးအသားဟာ မှန်ကန်ကြောင်း သင်ဘယ်လိုသေချာအောင်လုပ်ပါသလဲ? စကားပြေ ရေးသားတယ် ဆိုတာ အများအားဖြင့်တော့ သင့်တော်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အကြံပြုချက် (၇) ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မသိသေးတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာဖွေပါ။ အဲဒီစကားလုံးကို အသုံးမပြုခင် ၄င်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်အောင် သေသေချာချာ လုပ်ပါ။ လတ်တလော သင်ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို အသုံးပြုရေးသားဖို့ရာ လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် (definition) နဲ့ ၄င်းရဲ့ ဂယက်အနက် (connotation) တို့ကို နားလည်ပြီလို့ မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်ပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါက စာဖတ်သူတွေကို ရှုတ်ထွေး (confuse) စေတဲ့အပြင် မရည်ရွယ်ဘဲနှင့် လှည့်စား (mislead) သလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါမျှ မသုံးဘူးသေးတဲ့ဝေါဟာရ တစ်လုံးကို အသုံးမပြုခင် နှစ်ခါပြန် စစ်ဆေး (double-check) ပါ။ (အဓိပ္ပါယ်သိတယ်လို့ ထင်ထားပြီး အရင်က သုံးခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလုံးများကိုလည်း အဲဒီလိုပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။)
ဝေါဟာရတစ်လုံးရဲ့ ရှင်းလင်းတိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဝေါဟာရပဒေသာကျမ်း (thesaurus) (သို့) ကြောင်းတူသံကွဲတွေကို စုစည်းထားသောစာအုပ် (synonym finder)တို့တွင် ရှာဖွေပါ။ အဲဒီလိုရှာတဲ့ အခါမှာလည်း အနက်တူစကားလုံးတွေရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ဂယက်အနက်တွေကိုပါ သေသေချာချာ လေ့လာသင့်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့စံစကားလုံးတွေနဲ့ စကားစုတွေကို စက္ကူအလံစိုက်ထားပါ။ စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ မှန်ကန်တိကျတဲ့ ကြောင်းတူသံကွဲစကားလုံး (synonyms) ကို ရရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင် စာအုပ်တွေကို လှန်လှောကြည့်ပါ။ website ထဲ ၀င်ကြည့်ပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း အပြင်ပန်းအားဖြင့် ဆင်တူတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ စကားလုံးတွေကိုတော့ ပြတ်သားတဲ့ အာရုံတွေနဲ့ သတိထားပါ။
သင့်ရဲ့ အရေးအသားဟာ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ရှေ့နောက်ညီညွတ်ပါစေ။ ကြီးကျယ်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အလွန်အမင်းစာဟန်ပေဟန်ပါပြီး စည်းဘောင်ဝင်တဲ့ ရုံးသုံးစကားလုံးတွေ (overly formal language) ကို ရှောင်ပါ။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အတွက် စာကို ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထင်ကြီးစေရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဆိုလိုချင်တာကိုရေးပါ။ ရေးတဲ့အတိုင်းလည်း အဓိပ္ပါယ်ပေါ်လွင်ပါစေ။ အရည်အသွေး မကျသွားပါစေနဲ့။ တစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်အရေးအသားကြောင့် ပေးချင်တဲ့အချက်အလက် မပျောက်သွား ပါစေနဲ့။ ခေတ်မီတိကျတဲ့ အရေးအသားနဲ့ ဟိတ်ဟန်များတဲ့ အရေးအသား (၂)မျိုးကြားမှာ နယ်နိမိတ်ပါးပါးလေးပဲခြားပါတယ်။
နာမ၀ိသေသနများ (adjectives) နှင့် ကြိယာဝိသေသနများ (adverbs) ကို မရွေးခင် ခိုင်မာသော နာမ်များ နှင့် ကြိယာများ(strong nouns and verbs)ကို ရွေးထုတ်ပါ။ နာမ်နှင့်ကြိယာများကို အထူးပြုသော စကားလုံးတွေဟာ အတွေးအခေါ်တွေရဲ့ ကြည်လင်ပြတ်သားခြင်းကို ပိုကောင်းစေပြီး စာပန်းချီကိုလည်း အထင်းသားပေါ်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစကားလုံးတွေဟာ ၄င်းတို့အထူးပြုရမည့်ဝေါဟာရတွေကို ပွဲလုသွားရင်တော့ နာမ်နဲ့ကြိယာတွေကို ခိုင်မာအောင် ပြုလုပ်ရပါမယ်။ အဲဒီလို ခိုင်မာအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ အတွက် ထူးပြုစကားလုံးများကို မလိုအပ်တော့တဲ့ အခြေအနေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အလင်္ကာမြောက်ဖို့အတွက် ပြန်ကျော့နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို ရှာရမှာဖြစ်သလို တစ်ဖက်ကလည်း စကားလုံး ပိုလျှံခြင်းမရှိအောင် သတိပြုရပါမယ်။ ပြောဆိုရေးလိုတဲ့အချက်ကို လေးနက်စေတဲ့အခါမှ သာလျှင် မိမိအရေးအသားကို ထပ်ကျော့ပါ။
ရေးထားတဲ့ မူကြမ်းကို အသံထွက်ဖတ်ခြင်းဖြင့် သဒ္ဒါနှင့် အသုံးအနှုန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပါ။ သင်ဖတ်လိုက်လို့ နားထောင်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်ရင် သင့်ရဲ့စာကို ဖတ်နေတဲ့သူအတွက်လည်း အဆင်မပြေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေးထားတဲ့စာကို အသံထွက်ဖတ်တာဟာ အချိန်ပေးရပေမဲ့ အသံတိတ်ပြီး စိတ်ထဲက ဖတ်တုန်းကမမြင်ခဲ့တဲ့ အချိုးမပြေတဲ့ စကားလုံးနဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ဒီနည်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အရေးအသားကို တခြားတစ်ယောက်ကို ပေးဖတ်ပြီး ဆန်းစစ်ဝေဖန်ခိုင်းပါ။ သင့်ရဲ့မူကြမ်းကို ဖတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ သဒ္ဒါ၊ အသုံးအနှုန်း၊ စုစည်းပုံ၊ ယုတ္တိရှိမှုနှင့်ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ မလိုပါ။ သူတို့အနေနဲ့ ပြဿနာရှိနေတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ စကားစုတွေ၊ ၀ါကျတွေနဲ့ စာပိုဒ်တွေကိုသာ အသားပေးထောက်ပြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်(၇)ကတော့ စာရေးသားရတဲ့အခါတိုင်းအတွက်တော့ လက်တွေ့ကျ နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အရေးအသားတစ်ခုခုဟာ သင့်အတွက် တန်ဖိုးရှိနေပြီးတော့ အရေးကြီးတယ်၊ သင့်အနားမှာလည်း ဝေါဟာရကျမ်းကို နောကြေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် သူရဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ဦးဏှောက်ကို ခဏငှားရမ်းပြီး အသုံးချလိုက်ပါ။ (ဒါပေမဲ့လည်း အသွားရှိရင်တော့ အပြန်လည်းရှိရမှာပေါ့။)
Permalink Reply by Aung Kyaw Phyo on May 16, 2013 at 15:54
Thank U for about that. That is very helpful for me. :) :)
Permalink Reply by Ratan Biswas on May 16, 2013 at 17:36
Permalink Reply by Soe Lin Aung on May 16, 2013 at 19:00
Permalink Reply by sikedeveechan on May 16, 2013 at 19:59
Permalink Reply by Green Roses Khokham on May 16, 2013 at 22:28
Permalink Reply by Aye Mya Thida on May 17, 2013 at 8:05
Permalink Reply by mg yit on May 17, 2013 at 10:24
Permalink Reply by ei ei han on May 17, 2013 at 12:25
Permalink Reply by aungkyaw htoo on May 17, 2013 at 14:43
ဂယက်အနက်ကို ရှင်းပေးပါဦး ကျေးဇူးပါ
Permalink Reply by hla chit on May 17, 2013 at 16:01
Permalink Reply by ko latt on September 26, 2013 at 22:51
Permalink Reply by အောင်မျိုးသိန်း on September 26, 2013 at 23:04